Bubble brittle, treelike ary karazany hafa: sary sy famaritana - Famokarana voankazo - 2019
Ny hafanam-pandrefesana hafakely - fanorenana ho an'ny zaridaina rehetra
Ny isan'ireo olona maniry ny maniry voly ao amin'ny tranokala akaikin'ny tranokely dia mitombo isanandro. Tena tsara ho an'ny toerana maneritery izay ilainao hambolena faritra maitso.
Ny avia dia tonga taminay avy tamin'ny vanim-potoanan'ny dinôzôra. Marina izany, tamin'izany fotoana izany dia nisy halehibiazina goavana sy bitika kely tamin'ny androntsika. Na izany aza, Farany dia ampiasaina amin'ny fandaminana ny tontolo iainana.
Malaza noho ny azy izy tsy mibaribary sy manohitra ny toetr'andro ary bibikely isan-karazany.
eo ho eo
Karazan-tsakafo aorian'ny fividianana
Top fitafy sy zezika
Sary sy famaritana
Anisan'ny vokatra malaza amin'ity zavamaniry ity ny mason'ny rivotra. Izy dia manana loko tena marefo tsy misy famongorana sy rhizomes, miparitaka manerana ny tany. Mahatratra haavon'ny metatra maromaro. izany brakaka Ny fivalozana dia mahazatra kokoa amin'ny fisaritahana sy ny faritra anaty.
Araho ny afomanga mirefotra ao amin'ny sary etsy ambany:
Misy izany Karazana zato lavitra bladder. Ny tena mahazatra azy ireo dia karazany fito. Hitan'izy ireo tao amin'ny faritanin'ny URSS taloha.
Hita any amin'ny toerana be vato any Crimea sy any Caucasus. Nalaina noho ny fiarovana tao amin'ny tahirin'ny Territorial Krasnodar. Mahatratra hatramin'ny iray metatra.
Ny hazavana dia maivana maitso maitso hatramin'ny 6 cm. Izy io dia manana voninkazo tsara tarehy, izay matetika antsoina hoe mena.
Ny tifitra dia mila manongotra alohan'ny ririnina, toy ity karazana bala ity Mety hangatsiaka be mandritra ny hatsiaka.
Ny voalohany amin'ny voninkazo dia mitranga ao anatin'ny 5 taona. Mandritra ny fahavaratra dia mamoaka voninkazo mamiratra ny ratra atsinanana.
Nampiasaina handravahana ny sisin-tany.
Cilician Bubble Shrub Mety hahatratra 4 metatra ny haavony. Ny rantsankazo mampidi-doza dia miha-antitra. Ny lozaka dia mibontsina amin'ny ravin-kazo matevina (pinnate), izay mavo maitso maitso ary mena-maitso etsy ambony.
Kaopy marevaka. Manana loko mavomavo mavokely izy io. Ny blaogera fararano dia mamony mandritra ny zato andro mahery hatramin'ny voalohandohan'ny volana Jolay hatramin'ny faran'ny volana septambra. Io karazana famokarana io dia mamoa voa. Izy ireo dia toy ny bozaka trondro - mangarahara amin'ny rindrina matevina.
Ny bubble mahazatra dia sangodim-borona mahomby avy amin'ny bala atsinanana sy ny hazo. Mahatratra roa metatra. Ny ravina dia maitso mavo. Crown extending. Mandritra ny 50 andro ny famokarana Manomboka amin'ny tapaky ny volana jiona hatramin'ny voalohany.
Ity karazana lava - zavamaniry misy tantely. Hazo mahavelona hatramin'ny 130 kg / ha. Ny fanamafisana ny voankazo dia mitranga amin'ny volana Oktobra.
Mihena ny salan'isa rehefa miala amin'ny solaitrabe. Bloom nandritra ny telo taona.
Ny karazana lava, izay mahatratra metatra metatra sy lavany. Nalefa tany Azia Afovoany, indrindra fa tany Turkmenistan. Mamolavola ny vatolampy. Miala amin'ny tsy fahampian-tsakafo ny onja, tsy mihoatra ny 9 ny isany tsirairay.
Aretina azo tsaboina tsara, izay Aza matahotra ny haintany sy ny hatsiaka. Mipoitra ny lohataona amin'ny lohataona. Ny hazandrano axillary dia misy fery maromaro maromaro. Ny voankazo dia endrika tsaramaso mangarahara.
Ny haavon'ny tongotra dia mahatratra telo metatra. Ny halavan'ny elany hatramin'ny 8 santimetre, eo amin'ny fitifitra hatramin'ny tarehintsoratra 14 mavomavo maitso.
Ny borosy fohy dia mamokatra voninkazo dimy mavo.
Ny voankazo dia mitovitovy amin'ny volom-boasary mena.
Ny endriky ny fototarazon'ny mother mother dia afaka manohitra hatramin'ny 25 degre ambanin'ny zero.
Hita ao Islandy, Holland, Tasmania, Nouvelle Zélande ary any amin'ny faritr'i Arktika sy ny ala ao Eurasia. Mahazo aina any amin'ny toerana misy toetr'andro mafana na mangatsiaka izy. Misy bala miposaka eo amin'ny tehezan-tendrombohitra, eny amin'ny haram-bato, eny amoron'ny renirano sy any an'ala.
Ny habeny dia mety manova ny 5 ka hatramin'ny 40 santimetatra. Ny ravinkazo mivelatra dia voatsindry ary voajono. Ny fakany faka dia kely lava kokoa noho ny takelaka, izay zaraina ho 7 kaopy paompy lay. Manohitra ny kolontsaina, mihanaka amin'ny spores ary ny fizarazarana amin'ny artificial of the turkey. Nampiasaina betsaka tamin'ny fanorenana ny tontolo iainana.
Mba hahafantarana ny lava bara mitsivalana amin'ny faritra misy anao miaraka amin'ny satroka tsara tarehy sy voninkazo, mila mahafantatra ianao Ny fepetra fototra momba ny fikarakarana an'io zavamaniry io.
Afaka mividy jiro any amin'ny fivarotana manokana ny orinasa na manangona any amin'ny toerana famaranana. Raha toa ka nitombo teo amin'ilay faritany mitovy amin'ilay toeram-panorenana amin'ny ho avy ny zavamaniry, dia mety tsy hitazona ny famantarana ny fananganana ny tompony. Misy fambolena sy fanaraha-mason'ny zavamaniry ao anatin'ny volana vitsivitsy voalohany.
Mitandrema rehefa nividy mba haka ny fakan'ny bakteria tsy misy mari-pamantarana ny fahamamoana sy ny lethargy. Ny zavamaniry toy izany dia tsy ho afaka hipetraka amin'ny ankapobeny ary ho faty amin'ny taona voalohany aorian'ny fambolena malalaka.
Aretina rehetra mitombo tsara any amin'ny faritra maina. Amin'ny fahamoram-po ampy, ny tany dia mety misy. Bubbler dia zavamaniry iray tsy misy dikany izay afaka mitoetra ao amin'ny tany sy ny tanimanga. Misy tsiranoka manify tsy fahita firy sy drafitra tsara. Ny zavamaniry dia mahatsiaro ho lehibe ao amin'ny faritra atsimon'ny faritra.
Ny ankabeazan'ny karazam-bala dia tsy matahotra ny hatsiaka, ary mampitony ny ranomandry amin'ny hafanam-potoana hatramin'ny 15 degre.
Ny fototeny matanjaka dia afaka mahatohitra hatramin'ny 25 degre ambanin'ny zero. Mandritra izany fotoana izany, na dia ny zavamaniry mangatsiatsiaka aza dia lasa lavitra ny fiandohan'ny lohataona.
Ny hafanana tsara indrindra dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 degre.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny hafanana be dia be, ny ravin'ny bala dia manomboka mamirapiratra aloha ary marefo, ary lavo aoriana.
Ny hafa amin'ny ririnina hafa amin'ny ririnina mety tsara amin'ny fambolena ao an-jaridaina na ao anatin'io zaridaina io dia ahitana: Ostrichnik, Kochedzhnik, Osmund, Orlyak,
Adiantum, Polyrales, Thief
Ilaina ny fahamatorana ampy, izay azo antoka fa ny famafazana tsy tapaka rehefa mitsangana ny mari-pana.
Ny fiakaran'ny vokatra dia tsy mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny orinasa. Mba hahazoana antoka fa ampy ny bubble dia ampy hanaraka ny fitsipika ankapobeny momba ny fandroahana.
Mila fitrandrahana tsy tapaka ny zavamaniry. Mampiroborobo ny satroboninahitra sy ny tifitra izany. Indrindra indrindra fa mila toeram-pambolena zava-maniry vaovao izay mbola tsy nanome voninkazo sy voankazo. Raha tsy misy ny famonoana rano tsy tapaka, dia tsy mety hanome endrika marika tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fotoana lava ny zavamaniry.
Amin'ny fahavaratra, afaka manao dipoavatra mandritra ny lohataona ianao, izay hanasa ny vovoka sy ny loto avy amin'ny raviny. Ampy tsara ny fampiasana ranon-tsakafo mahazatra.
Miaraka amin'ny hafanana be loatra, dia ampiasaina ny hoditry ny sifotra, izay manana tsara tarehy tsara. Ny fandroana loatra dia mitarika ny fahaverezan'ny ririnina.
colutea Tsy mila fanafody fanampiny fanampiny. Raha azo, ny dingam-pikarakarana dia atao amin'ny vanim-potoana mivoatra mavitrika ny Aprily ka hatramin'ny Aogositra. Ny doka tokana mandritra ny herinandro maromaro dia ampy ho an'ny zavamaniry hitombo mazoto.
Ho an'ny bladder mahasalama iombonana amin'ny fambolena zavamaniry.
Ny fiakarana ambony amin'ny fararano sy ny ririnina matetika dia miteraka aretina goavam-be.
Ny lohataona aloha dia ny fotoana tsara indrindra hanetsehana. colutea. Ny zavamaniry dia manomboka ny vanim-potoana mivoatra mavitrika, rehefa manomboka mitombo ny tonta sy ny raviny.
Eo amin'ny toerana vaovao dia manitsy haingana ny bubble. Ho an'ny famindrana dia ilaina ny manamboatra boribory ny tany manodidina ilay orinasa.
Raha tokony haverina amin'ny fahavaratra na ny fararano ny zavamaniry, dia mila manara-maso ny fitondran-tenany ianao ary mamindra matetika ny tany.
Ny baiko entina manadina:
Mizara ampahany amin'ny toeram-piompiana olon-dehibe iray miaraka amin'ny fakany voa. Ao amin'ny kirizy dia tokony ho be ny tany.
Fidio izay toerana tsara indrindra azonao aleha.
Afangaroy ny lavaky ny habetsary ilaina ary hamafisina tsara ity toerana ity.
Atsipazo ao anaty lavaka ilay zavamaniry ary alao ny fakany.
Manararaotra izany amin'ny tany sy ny rano izy io.
Miezaha tsy hikasika ny ravina, ka tsy manimba azy ireny mandritra ny fanondranana azy.
Tsy mila fialana amin'ny ririnina i Fern. Rehefa avy navotsotra avy amin'ny raviny, dia afaka mamerina ny volo vaovao amin'ny fanombohan'ny lohataona ny tifitra.
Ilaina ny manapaka fotsiny ny rantsana marefo sy simba ao anaty kirihitra. Ho an'ireny tanjona ireny, dia manosika zaridaina sahaza. Ilaina ny manala ny sampana amin'ny toerana tena izy, satria amin'ny fahitana ny ampahany amin'ny fahatsapana, tsy mety hita ny olana anatiny.
Ny sampana marevaka amin'ny lava-pandrika mifangaro miaraka amin'ny voninkazo sy ny voankazo tsara tarehy dia afaka manamboatra ny zaridaina rehetra. Tsy ilaina ny fitandremana manokana, ka mihamaro hatrany hatrany ireo tia an'io zavamaniry io. Amin'ny toerana mety ao amin'ilay tranokala dia afaka manao hira samihafa ao amin'ny lava, izay hifanaraka tanteraka amin'ny mponina hafa ao amin'ny zaridao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny hafanam-pandrefesana hafakely - fanorenana ho an'ny zaridaina rehetra